Izithombe ezibonakalayo zokungafani komphakathi
Izinto ezibizayo, izingubo kanye namagajethi, ubuchwepheshe "bells kanye namacilisi" kanye nezimonyo ezikhethekile - azithengi kuphela ngabacebile, ngaphandle kwalokho, mhlawumbe, lezi zinkampani ziyobe sezivele ziphelile. Zitholwa yibo abafuna ukuvela "okupholile".
Izithombe ezibonakalayo zokungalingani kwezenhlalakahle zisisondeza kuyo yonke indawo. Futhi manje sikhathazekile ngokuthi asikwazi ukuthenga "Gucci" noma "i-Armani", futhi cishe cishe hhayi ezinyangeni ezimbalwa ezilandelayo - kodwa ngokujwayelekile ...
Ungamphoqa kanjani umthengi ukuthi akhokhe ngokoqobo "emoyeni"? Mnike umkhuba nomkhiqizo! Kule nkathi, izicathulo zemfashini zinjalo-ke, futhi uNkulunkulu makwenqabe ukuba ungabhubhisi! Bahamba bezungeza umuzi, baya emgwaqweni ongaphansi komgwaqo bese bezama ukuphuma ngaphandle kwe-salon yemoto yentombazane ebiza kakhulu - njengokhetho.
Uma into iyahamba-ingabe iyabiza noma iyabiza kakhulu?
Yiqiniso, ukubaluleka kwesitayela sabo esiyingqayizivele kuphezulu. Lokhu kufunwa, kodwa ezimweni eziningi isifiso "sokuba sikhethekile" futhi ngesikhathi esifanayo "ukuhlangabezana" kusho ngisho nezindleko ezinkulu kunangaphambili.
Owesifazane ozintandokazi akabheki "nezimpahla zabathengi", noma ngabe izingubo ezifashini nezicathulo ezivela ezitolo. Lezi izinto ezizimele, ezizenzekelayo nezindleko. Lezi zigqoke iminyaka futhi zenziwe ngamakhophi amaningana ukuze kungabi khona ukuhlelwa futhi. Yile ndlela ukubonakala okungalingani kwezenhlalo kubonakala ngayo - uma sekucacile, "ngubani oye wafunda ukuthi" futhi kuphi lapho ehola khona.
Ngeshwa, lezi zithombe ezibonakalayo ezibonakalayo zokungalingani kwezenhlalo zivimbela amantombazane amancane kanye nabesifazane abashadile ngokujulile ukuba bazizwe bejabule futhi befuna, bezwakala futhi bamukelekile.
Kusobala ukuthi uma sikhuluma ngenkampani enesithakazelo esisodwa, isitayela sabo silingana, noma, kunoma yikuphi, ama-value ozimele zezimfanelo eziyinhloko. Imoto, izindlu, izingubo - konke lokhu kukhuluma kumuntu.
Funny futhi engakhululekile
Ukubheka amantombazane abakhetha izinyosi ngoba umfana wabo uwathatha ekolishi ngemoto uyamangalisa futhi uyahlekisa. Futhi oontanga ngokuqinisekile abuhlungu kabi.
Ngakolunye uhlangothi, intombazane ehlakaniphile noma encane ayikhohlisi ukunakekelwa kokungalingani kwezenhlalakahle. Izimo zokuqala zingase zihluke, futhi "indawo" yokuya ngayinye - eyayo. Omunye umnandi futhi ukhululekile ukuba ngumama. Omunye - i-bitch eshaqisayo futhi ecasulayo (ngomqondo omubi wezwi).
Akusiyo njalo ithuba "lokujabula" kumnandi. Ngokuvamile ukudlala umuntu uzithola ezungezwe "izintombi" ezithosiwe, ezemidlalo, ezithandwayo, ngezwi, abaphikisanayo. Futhi impilo yakhe ibuye ibe nzima - ulinganisa amafutha engeziwe futhi adonsa ubuhle kude nomthandekayo wakhe. Yebo, futhi "othandekayo" usuvele uqalile ukuwuvula ngekhala - Ngizothatha iminyaka engama-25 yomshado, "khona-ke uzobe usuvele usakaza ..."
Ukuzama "ukufinyelela izinkanyezi" akusizi ngalutho
Kodwa abaningi bazama kanzima kakhulu! Benza izikweleti, babole imali yokubolekisa imali - nje ukuze bathole imali eminingi futhi badle. Ngakho-ke, ngenxa yemifanekiso ebonakalayo yokungalingani kwezenhlalakahle, ngaphambili abantu abajabule futhi abanokuqukethwe nabantu abancane abajabuli kakhulu.
Ungaphila ngaphandle kwe-Gucci futhi ngaphandle kwe-Prada, kodwa ... abangani abamemezayo ku-elite (futhi cishe uqobo lwabo) efulethini noma ngisho "ikhaya lamaphupho akho", uthola injabulo engenakuqhathaniswa. Futhi iqiniso lokuthi kufanele ukhokhe intengo enkulu yenjabulo, ukuziqhayisa emsebenzini futhi uthathe nawe - awudingi ukwazi ...
Ngakho-ke, singasho ngobuqotho ukuthi izithombe ezibukwayo lapho isikrini se-TV sibonisa ngaso sonke isikhathi singabhubhisi nje ukungalingani kwezenhlalakahle. Benza ufune okungaphezulu.
Uma u-Avicenna olandelayo noma u-Einstein engavumi ekufinyeleleni okuncane, futhi abagijimi abaqeqeshiwe bayagxuma, bagijimele ngokushesha kwi-skis, bese badubula ngokunembile. Kodwa ukubuka i-propaganda (uxolisa leli gama elibukhali lamaSoviet, kodwa ngaphandle kwalo awukwazi ukwenza) UKUKHUMANA, ngokuzibandakanya uqala ukucabanga: kungani konke lokhu?
Kuhle uma ungashiya isikhala esiphila izingane, uqinisekise izimpilo zabo ... kodwa abazange babelethe ezimweni ezinhle? Isizukulwane ngasinye ngandlela-thile sathinteka, sazama, sazama ukuhlala nesinkwa esiphundu esiphundu. Ukunciphisa lezi zinsuku kuwukuthi, ngezinga eliphakeme, phatha ukubukwa kwawo kwezwe, ukubeka umqondo wokuthi izwe liyi-sandbox enkulu nabomama abathandayo abaseduze. Abantu abazogaya, banike ice cream ...
Akukho mqondo womhlaba wonke osemuva kokusetshenziswa futhi ngeke kube - kukhona inzuzo kuphela
Futhi lokhu kuyinzuzo yezinkampani, ukukhathazeka, amafemu, izilo zakwa-intercontinental ezingenisiwe, ezithunyelwa ngaphandle, ezakhiwe hhayi lapho zihlala khona. Ngakho-ke, ukufuna ukuthola i-Bentley ayinalutho.
Umkhiqizi ngamunye ufuna ukunikela ngemikhiqizo yabo ngenani elikhulu ngezindleko eziphansi. I-noodle esheshayo ibizwa ngokuthi isidlo sasemini yebhizinisi, futhi isidlo sasemini lebhizinisi yisidlo sokudlela. Bonke abanye bamenyiwe ukuba bathole lezi "zincoma ezivela kumpheki", futhi bangacabangi ukuthi hlobo luni lwe-offal oluphekiwe.
Konke kunencazelo yegolide
Yiya ematendeni etendeni, akekho odingeka ukugibela ezithombeni zangaphambili. Kodwa nokho ngezinye izikhathi ucabanga ukuthi kungcono kunokuba "izingubo ezifashini" - izingubo ezintsha nje. Isiketi esisha, esinganyathelwanga futhi sikhululekile izicathulo. Imoto entsha ezohamba lapho inhliziyo yakho ifisa khona. Ifulethi elihlelwe kahle. Bathi i-jacuzzi, ngemuva kokufakwa yi-plumbers yethu kanye nombane kagesi kunendawo yokushaya manje ...
Ukufa kuholela ekulaleleni futhi kuhudula abangalaleli
Ukuvikelwa esweni elibi
Uphi nokuthi ungathola kanjani ugqozi?
Ukuqashelwa komzimba womuntu: imikhuba ejulile
Kusho ukuthini isibhakabhaka?
I-saint yakho yomphathiswa ngosuku lokuzalwa
Ukubingelela kusukela ngo-Mashi 8
Ukukhethwa kweminye imibono engcono kakhulu yomshini wesithombe somshado
I-Stengazeta ngosuku lukaMfundisi ngezandla zami ephepheni: izifanekiso nezithombe ezinyathelo ngezinyathelo. Indlela yokudweba iphosta yeSuku Lothisha
Ukupheka ngokupheka inkukhu
Lahleka ingane ephusheni
Indlela yokubukeka encane kuneminyaka yabo: 5 amaqhinga asebenzayo
Indlela yokwenza ukwakheka kwamehlo ngamajwabu amehlo asondelayo: 5 ukuphakama
Ama-biscuits ngesiNgisi "Anglesey"
Izimbali ze-crochet: umdwebo kanye nencazelo ezifundweni
Isibindi nelayisi namakhowe
Isobho "Minstra Tricolore"
I-Singer Pink: ukwesaba okunqobile
Isakhiwo noma isitayela esingavamile? Yini okufanele ngiye esikoleni?
Indlela yokuvimbela ukukhulelwa okungadingeki?
Ukuthanda indoda kwenza owesifazane abe mnandi
Imenyu yonyaka omusha we-2017 Yokudla: zokupheka zokudla okuthakazelisayo nezithombe namavidiyo. Kufanele kube yimenyu yabantwana nabantu abadala ePhathi Lomnyaka Omusha
IFinland yizwe lezimanga zasebusika